युगसम्बाद साप्ताहिक - के भयो बिम्स्टेक शिखर बैठकमा ?
के भयो बिम्स्टेक शिखर बैठकमा ?
काठमाडौं । निकै तामझाम र जनताले सास्ती पाएको दुई दिने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन १८ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो । यो सम्मेलनका कारण काठमाडौंका केही सडक खाल्डारहित भए भने रंगरोगन पनि गरियो । दुई दिन काठमाडौंको सवारी अस्तव्यस्त भयो । जनतालाई दिनुसम्म सास्ती दिएर सम्पन्न बिम्स्टेक शिखर बैठकले यो क्षेत्रबाट गरिबी घटाउने र लगानी र व्यापारको माध्यमबाट आर्थिक उन्नयनको दिशामा अग्रसर हुने प्रतिबद्धता व्यक्त ग¥यो ।
बिम्स्टेक सम्मेलनका क्रममा नेपाल र भारतबीच काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्गको पूर्वअध्ययन गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता भयो । यो सम्झौतापछि नेपालमा रेल ल्याउन उत्तर र दक्षिणी दुबै छिमेकीबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । नेपालले भएको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन सक्ने हो भने यो ठूलो उपलब्धि मानिन्छ । बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
द्विपक्षीय सम्झौतामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी र नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । सो सम्झौतामा काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र त्यसका लागि प्राविधिक तथा प्रविधिको प्रयोगसमेत भारत सरकारका तर्फबाट हुने उल्लेख छ । एक वर्षभित्र अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस्तै केही समय पहिले नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि रेलमार्ग निर्माणका विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनुभएको थियो । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाइसकेको सो विषयलाई पछिल्लो सहमतिले थप मार्ग प्रशस्त गरेको छ । विगतमा पनि नेपाल भारतका उच्च नेतृत्वको भ्रमणका क्रममा जारी भएका संयुक्त वक्तव्यमा समेत रेलमार्गको विषयले उच्च प्राथमिकता पाएको थियो ।
सम्झौतापछि काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया एउटा नयाँ बिन्दुमा प्रवेश गरेको छ । सम्झौतापछि रेलमार्ग निर्माणका लागि व्यावहारिक तहमा गति दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
यसअघि सैद्धान्तिकरुपमा मात्रै चर्चा भएको उक्त रेलमार्ग निर्माणमा भएको सम्झौताले नयाँ आयाम थपेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्रै रेलमार्ग निर्माणमा वास्तविकरुपमा प्रवेश गर्ने जानकारी दिँदै सचिव अधिकारीले भन्नुभयो, “सम्झौताले मार्ग प्रशस्त गरेको छ, केही समय पछि अध्ययन शुरु हुन्छ ।”